ထိုင်ဝမ်သင်္ကြန် ~ မြတ်မွန်
Posted by မြတ်မွန် | 4/10/2011 10:54:00 PM | ဓာတ်ပုံ
ဒီနေ့(၁၀.၄.၂၀၁၁) ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ မြန်မာသင်္ကြန်ပွဲကို မြန်မာဈေးဆိုင်ခန်းများရှိတဲ့ မြန်မာတန်းမှာ ကျင်းပပါခဲ့တယ်။ မနက်စောစော မနက်စာ သွားဝယ်ရင်း သင်္ကြန်ပွဲတော်အတွက် ပြင်ဆင်နေတာကို တွေ့ခဲ့ရတာနဲ့ ပုံတချို့ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မနက်၉နာရီ လောက်မှာ မြန်မာသင်္ကြန်ပွဲကိုစတင်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကင်မရာယူပြီး နောက်တခေါက်သွားရိုက်ခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံတစ်ချို့ကို နိင်ငံရပ်ခြားရောက်နေကြတဲ့ စာဖတ်သူမိတ်ဆွေများနဲ့ ဘလော့ဂါမောင်နှမများ မြန်မာပြည်သင်္ကြန် အလွမ်းပြေ ကြည့်နိင်ဖို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ယာယီဆောက်ထားသော မြန်မာ့ဓလေ့ရိုးရာ ပြခန်းများ
မြန်မာ့အတာသင်္ကြန် ပိတောက်ပန်းအတုလေးတွေနဲ့ အလှဆင်ထားကြတယ်။
မြန်မာရိုးရာ တူရိယာ အသေးစားလေးများ
အနီနဲ့အပြာ အလံလေးက ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံအလံပါ။ မြန်မာနိင်ငံအလံနဲ့ တော်တော်လေးတူပါတယ်။
Taipei ခရိုင်မှူးကလည်း မြန်မာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ပါဝင်စဉ်နွဲနေပုံ
7-eleven ကလည်း မြန်မာသင်္ကြန်တွင် ရေသေနတ်ရောင်းနေပုံ
ဒီလို တိုင်ကီပုံးတွေထားပြီး ရေးပေးပါတယ်။
ရေပန်းများ မနားတမ်း မှုတ်ထုတ်ပေးနေပုံ
နိုင်ငံခြားသားများ၊ ထိုင်ဝမ်လူမျိုးများလည်း မြန်မာအတာသင်္ကြန်တွင် ပါဝင်ဆင်နွဲ
သူကတော့ ထိုင်ဝမ်သီချင်းဆို ပြိုင်ပွဲမှာ ဆုရရှိဖူးတဲ့ မြန်မာပြည်သား အဆိုတော်ပါ။
သတင်းဌာနတွေကလည်း သင်္ကြန်ပွဲတော်ကို အစအဆုံးရိုက်ကူးနေကြပါတယ်။
မြန်မာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ထိုင်ဝမ်နိင်ငံ ရုပ်သံဌာနမှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပုံ
ကံစမ်းမဲတွေဖောက်ကြတာတော့ ရိုက်မလာဖြစ်လိုက်ဘူး။ မြန်မာနှင့်ထိုင်ဝမ် အသွားအပြန် လေယဉ်လက်မှတ် မဲဖောက်ပေးပါတယ်။ တစ်ခြားဆုတွေနှင့် ပိုက်ဆံတွေ မဲဖောက်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။နေ့လည် ၂နာရီခွဲလောက်မှာ မြန်မာ သင်္ကြန်ပွဲတော် အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးသွားပါတယ်ရှင်။ အခုပွဲကို ထိုင်ဝမ်နိင်ငံရဲ့ လွှတ်တော်အမတ်တွေက စီစဉ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်ဝမ်ရောက် မြန်မာအသင်းက ဦးဆောင်စီစဉ်မယ့် သင်္ကြန်ပွဲတော် နောက်တပွဲကို ၂၄ရက်နေ့မှာ ထပ်မံပြုလုပ်အုံးမယ်လို့တိုးတိုးတိတ်တိတ် ကြားသိရပါသေးတယ်။
လာလည်ကြတဲ့ စာဖတ်သူများနဲ့ ဘလော့မောင်နှမများအတွက် ပျော်ရွှင်ဖွယ် နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ရှင်။
ဒါပေမယ့် အဲ့မှာလို ရေပက်လို့ရဘူးရယ်...၊ဒါပေမယ့် ပျော်
ကိုမြင်တော့ အနီနဲ့အပြာက မြန်မာပြည်အလံ၊သုံးရောင်
4/10/2011 11:16 PM
ရေ တွေ အဲ့လိုကို ပတ်ကြတယ်ပေါ့ ..
ပျော်စရာကြီးးး ...း))
4/11/2011 12:24 AM
4/11/2011 1:19 AM
တပျော်တပါး ဆင်နွှဲကြတာပဲနော်....အားကျစရာကြီး...း)
မွန့်ကိုရေကြိုလောင်းသွားရင် ကောင်းမလားးးးးး....း)
4/11/2011 7:08 AM
ဝေး ဟေး ဟေး ကျော်လိုက်တာဟာ မြင်ရ ကြားရတာ အဟင့် နာတို့မှာ ချိဘူးရယ်း(((((
မွန်မ . . . ဗွမ်း . . . လောင်းတယ်ဟား))) ဌဲဌဲး)))
4/11/2011 7:56 AM
သင်္ကြန်လာကျသွားတယ် ညီမလေး မွန်ရေ..
ဒီနှစ်ပွဲက မနှစ်ကထက်လူပိုများလာပေမဲ့ အကပဒေသာတင်ဆက်မှုတွေက မနှစ်ကလောက် မရှိဘူးနော် ။
မြန်မာ့ရိုးရာတူရိယာတွေ ကိုပြထားတာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အင်ဒိုနီးရှား တို့ ၊ဗီယက်နမ်တို့ ရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေနဲ့ ရောပြထားတော့ မသိတဲ့သူတွေအတွက် ရောယောင်မှုတွေ ဖြစ်စေတယ် ။
၂၄ ရက်နေ့မှာ ရှိသေးတယ်တဲ့လား၊
ညီမလေးနဲ့ လူချင်း တခါမှ မဆုံဖြစ်သေးဘူးနော် ..
ပျော်စရာကြီး... မြန်မာသင်္ကြန်ပွဲကို စည်အောင်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းပါတယ်။
4/11/2011 10:50 AM
မိုးတို့ မှာလည်း မနေ့ကလုပ်တယ်။
ဆန်းတော့ဆန်းသား ရေမပက်ပဲပျော်ခဲ့ရတဲ့သင်္ကြန်တွက်း)
မွန်ရေ ရေပက်ခဲ့ပြီနော် နံသာရေအေးအေးလေးကို အောင်သပြေခတ်ကလေးနဲ့
4/11/2011 10:59 AM
(ခွက်စုတ်လေးနဲ့ ပက်တာလောက်တော့ ရီတာပေါ့ ရီတာပေါ့)အမှတ်တယ သင်္ကြန်
ဘာလိုလိုနဲ့ချစ်စရာ သင်္ကြန်ကို
သူတို့ လည်း ချစ်တတ် လာကြပြီလေ..။
ဒါနဲ့ .. အခုနှစ်ဗမာပြည်က သင်္ကြန်မှာ
သံကြပ် တွေ မထိုးရဘူးလို့သိရတယ်။
4/12/2011 8:45 PM
သူတို့မှာ လန်းလှချည်လား.. ဒီမှာတော့ အရှေ့တောင်အာရှ ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်တွေ ဆိုတာတွေတောင် လုပ်လို့မရဘူး.. :( ရေတွေ လောင်းနေကြတာ ပျော်စရာကြီး.. :D
4/13/2011 7:23 PM
ထိုင်ဝမ်မှာတော့ နှစ်တိုင်း စည်ကားအောင် လုပ်ပေးတာပဲ။ အစိုးရက ဘတ်ဂျတ်ချပေးတော့ ခမ်းခမ်းနားနား လုပ်လို့ရတာပေါ့။
ဘယ်လောက်ပဲစည်စည်ပါ။ ကိုယ်တိုင်တော့ ဝင်ကစားချင်တဲ့စိတ် ပျောက်နေတော့တယ်။
မြန်မာပြည် ပြန်ရောက်မှပဲ ကဲချင်မယ်နဲ့ တူပါရဲ့။
အပင်ဖျန်းတဲ့ ရေပန်းလေးနဲ့ ရေလောင်းသွားပါတယ်။
ကြည့်ရတာ ပျော်စရာကြီး ညီမလေးမြတ်ရေ... ထိုင်ဝမ်မှာလည်း မြန်မာတွေ ဒီလိုတစုတဝေးနဲ့ ကျင်းပတတ်မှန်း အခုမှသိရတယ်။ ပြန်ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးပါနော်။
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သော သင်္ကြန်ကာလနဲ့ အောင်မြင်ငြိမ်းချမ်းသော နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ ညီမလေးရေ...
4/14/2011 8:54 AM
ဓါတ်ပုံရိုက်ရင်း ကင်မရာ ရေမစိုခဲ့ဘူးလား။ တော်သေးတယ်။ နို့မဟုတ်ရင် ဓါတ်ပုံတောင် ကြည့်ခွင့်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ တကယ်ကို ပျော်စရာကြီးပါလား။။။
4/16/2011 8:01 AM
မွန်ရေ ထိုင်ဝမ်သင်္ကြန်လာငေးတယ် ...
မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ ...
4/17/2011 12:58 PM
4/17/2011 1:08 PM
မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံသောနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ။ စာပေကောင်း များ ကို သိမ်မွေ့နူးညံ့သော အရေးအသားများဖြင့် ဆက်လက် ရေးသားနိုင်ပါစေ။
အစဉ်အလာမပျက် အဲလို စည်စည်ကားကား ဖြစ်အောင် လုပ်ခွင့်ပေးတော့ ပျော်စရာကြီးပဲနော်။
4/20/2011 2:13 AM